Uganda oo doorashada guud loo dareerayo - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Uganda oo doorashada guud loo dareerayo
Uganda oo doorashada guud loo dareerayo
Dadka Uganda ayaa waxa ay saakay u dareerayaan goobaha codbixinta ee doorashada guud, si ay u doortaan madaxweynaha shanta sano ee soo socota uu yeelanayo dalkaasi Uganda.
Madaxweyne Yoweri Museveni oo dalkaasi ka talinayay muddo sodon sana ah ayaa doonaya in uu xilka sii hayo, hasayeeshee waxaa uu tartan adag la galayaa ninka ugu cadcad mucaaradka ee Kizza Besigye iyo Ra’iisul Wasaarihii hore ee Amama Mbabazi.
Codbixiyayaasha ayaa sidoo kale waxa ay dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka iyo hogaamiyayaasha maxaliga ah.
Hasayeeshee waxaa dalka ka jira walaac kaddib qalalaasihii dalkaasi ka dhacay maalintii Isniinta.
Guddiga Doorashooyinka ee dalkaasi ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay qabtaan doorasho xor oo cadaalad ah.
Halkan kala soco faafaahinta wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Uganda, iyadoo uu si toos ah aannu hadba idinkugu soo gudbin doono wixii ku soo kordha wararkaasi.
Previous articleBarakacayaasha Daarfuur oo sii kordhaya
Next articleDHAGEYSO: Axmed Madoobe” waxaan qaadeynaa howlgal aan kula wareegayno caasimadda Jubbaland”
Ciidanka Kenya oo Laba qof Soomaali ah ku xiray Nairobi
Dowladda Somalia iyo QM oo heshiis kala saxiixdey
Feeryahanad Soomaaliyeed oo ka guuleysatay mid Kenyan ah
QM” Afghanistan 3400 oo qof ayaa ku dhintay 2019-kii”